Swedish badan oo shaqada ka fariisanaya | Somaliska
Swedish fara badan ayaa la filayaa in ay gaboobaan oo shaqada ka fariistaan 15ka sano ee socata. Laanta Shaqaalaynta Sweden (Arbetsförmedlingen) ayaa ku qayaasaysa in ilaa 1 million iyo 600 oo kun ay shaqada ka fariisan doonaan balse ay adkaan doonto in loo helo dhalinyaro buuxisa boosaska banaanaaday. Dad la'aanta ugu badan ayaa la filayaa in ay soo wajahdo qaybaha caafimaadka iyo daryeelka dadka waaweyn. Madaxa Laanta Shaqaalaynta Agneles Bermudez Svankvist ayaa sheegtay in ay muhiimtahay in wax la baro dadka soo galootiga qaasatan dumarka si ay buuxiyaan boosaska banaandoona. Agneles ayaa sidoo kale sheegtay in ay muhiimtahay in wax loo qabto dhalinyarada aan iskuulada dhamaysan. Ayadoo dadka badankoodu ay aaminsanyihiin in Sweden ay shaqo la'aan ka jirto ayaa sidoo kale la filayaa in Sweden ay u baahan doonto shaqaale fara badan sanadaha soo socda.
Swedish fara badan ayaa la filayaa in ay gaboobaan oo shaqada ka fariistaan 15ka sano ee socata. Laanta Shaqaalaynta Sweden (Arbetsförmedlingen) ayaa ku qayaasaysa in ilaa 1 million iyo 600 oo kun ay shaqada ka fariisan doonaan balse ay adkaan doonto in loo helo dhalinyaro buuxisa boosaska banaanaaday.
Dad la’aanta ugu badan ayaa la filayaa in ay soo wajahdo qaybaha caafimaadka iyo daryeelka dadka waaweyn.
Madaxa Laanta Shaqaalaynta Agneles Bermudez Svankvist ayaa sheegtay in ay muhiimtahay in wax la baro dadka soo galootiga qaasatan dumarka si ay buuxiyaan boosaska banaandoona. Agneles ayaa sidoo kale sheegtay in ay muhiimtahay in wax loo qabto dhalinyarada aan iskuulada dhamaysan.
Ayadoo dadka badankoodu ay aaminsanyihiin in Sweden ay shaqo la’aan ka jirto ayaa sidoo kale la filayaa in Sweden ay u baahan doonto shaqaale fara badan sanadaha soo socda.